यौनसम्बन्ध बुझ्न सकेनौं भन्ने मेरो श्रीमानको आरोप छ - यौन मनोविज्ञान - साप्ताहिक
प्रश्न: मेरा श्रीमान्को ममाथि के आरोप छ भने मैले उहाँसँगको यौनसम्बन्धलाई बुझ्न सकेको छैन । उहाँको भनाइ यौनसम्बन्ध दैनिक र दिनको दुई पटकसम्म हुनुपर्छ भन्ने छ, तर मलाई त्यस्तो विचार मन पर्दैन । मलाई त्यो समयमा निकै रिस उठ्छ र झगडा पनि गर्छु तर उहाँ मान्नुहुन्न । मैले सहमतिमा हप्ताको एकपटक यौनसम्पर्क गर्ने कुरा गरिसकें, तर उहाँ त्यसरी आफ्नो यौन इच्छा मार्न नसक्ने कुरा गर्नुहुन्छ । हिजोआज उहाँमा चिडचिडाहट पनि देखिन थालेको छ । हामीबीचको यो समस्या कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ? के दैनिक दुई पटक सम्बन्ध राख्नु साधारण हो ?
तपाईंहरूबीच कुनै चिन्ता, मतभेद वा झगडा छ भने त्यो पनि प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ । तपाईंको प्रश्न पढ्दा एक–अर्काप्रतिको सम्मानमा कमी आएको पनि बुझिन्छ । एक–अर्काप्रतिको आकर्षणमा कमी भएको पनि हुन सक्छ अथवा भनौं मानसिक तनावका थुप्रै स्रोत हुन सक्छन् । तिनीहरूका बारेमा पत्ता लगाउने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर जोड दिनुपर्ने हुन्छ । एक–अर्कालाई दोष लगाउँदा दैनिक जीवनमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्छन् र तपाईंको सम्बन्ध थप जटिल बन्दै जान्छ । दुई जनाबीच यौनचाहनालाई लिएर भावना साटासाट वा भावना सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंको समस्याको वास्तविकतामा पुग्नुअघि यस्ता धेरै विषय केलाउनुपर्ने हुन्छ ।